काठमाडौँ, २२ साउन । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रममा गरेको लगानी खेर गएको देखिएको छ। शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र सानोठिमीले सोमबार सार्वजनिक गरेको यससम्बन्धी एक प्रतिवेदनले विद्यार्थी गणित र नेपालीमा कमजोर बन्दै गएको प्रष्ट पारेको छ। सरकारले अध्ययन गरेको कक्षा पाँचका विद्याथीको सिकाइ उपलब्धिको राष्ट्रिय परीक्षण २०१८ को नतिजाअनुसार गणित विषयमा ७२ प्रतिशत विद्यार्थीले पाठ्यक्रमअनुसारको न्यूनतम सिकाइ उपलब्धि..
काठमाडौं, २१ साउन। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अस्थायी शिक्षकको दरबन्दी थप्ने तयारी गरेकाे छ ।शिक्षा मन्त्रालयले प्रावि, निमावि र मावि तहमा ३८ हजार अस्थायी दरबन्दी थप्ने तयारी गरेको हो। स्थायी शिक्षक पदपूर्ति गरेपछि अस्थायी शिक्षकको दरबन्दी थपिने छ। स्थायी पदपूर्ति गरेपछि मन्त्रालयले अझै ६० हजारभन्दा बढी शिक्षक आवश्यक रहेको तथ्यांक संकलन गरेको छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अस्थायी शिक्षकका लागि नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्ने..
काठमाडौँ, २१ साउन । आगामी शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा ९ देखि १२ सम्मको पाठ्यक्रम परिमार्जन हुने भएको छ । समय परिस्थितिअनुसार प्रत्येक पाँच-पाँच वर्षमा पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्ने नियमानुसार पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्न थालिएको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका निर्देशक गणेश भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार अब कक्षा ११ र १२ मा थप दुई विषय पढ्नु पर्ने हुन्छ । उहाँका अनुसार जीवन उपयोगी सीप र..
चितवन, २१ साउन । कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालयले ६६ जना उपप्राध्यापक माग गरेको छ। चितवनको रामपुरमा रहेको चितवनको रामपुरमा रहेको कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालयले खुला प्रतियोगिताबाट ६६ जना उपप्राध्यापक मागेकाे हाे । कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयले सूचना निकालेर कृषि र वनविज्ञान संकायअन्तर्गत आंगिक कलेजका लागि विभिन्न विषयमा उपप्राध्यापक पदमा स्थायी पदपूर्तिका लागि आवेदन खुला गरेको छ। आवेदन दिने म्याद मंगलबारदेखि भदौ..
काठमाडौं, २० साउन। सरकारी कर्मचारीको नयाँ तलव तय भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले तयार गरेको नयाँ तलब संरचना मन्त्रिपरिषद्‌ले स्वीकृत गरेसँगै कर्मचारीको नयाँ तलब निर्धारण भएको हो। अर्थ मन्त्रालयले सबै तहका निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल, स्वास्थ्य सेवा, संसद सेवा, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको तलव सार्वजनिक गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको नयाँ..
सामुदायिक विद्यालयको सिकाइ कमजोर ! यस्तो छ अवस्था
काठमाडौँ, २० साउन अझै सामुदायिक विद्यालयका कक्षा ५ मा अध्ययनरत विद्यार्थीको गणितमा ३२ प्रतिशत र नेपाली विषयमा २० प्रतिशत सिकाइ कमजोर रहेको पाइएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र र शिक्षा पत्रकार सञ्जालले आज यहाँ ‘विद्यार्थी उपलब्धिको राष्ट्रिय परीक्षण–२०७४ को नतिजा’ सार्वजनिक कार्यक्रममा केन्द्रका महानिर्देशक टेकनारायण पाण्डेले गणितमा ३२ प्रतिशत र नेपालीमा २० प्रतिशत विद्यार्थीले कक्षामा सिक्न..
नर्सिङ पढाउन सय शैयाको अस्पताल सञ्चालन गर्नुपर्ने
काठमाडौँ, २० साउन नर्सिङ पढाउका लागी अब कलेजले १ सय शैयाको अस्पताल सञ्चालन गर्नुपर्ने भएको छ । ५० शैया सञ्चालनका लागि स्वीकृति लिएका अस्पताल देखाएर ४० जना विद्यार्थी पढाउँदै आएका कलेजलाई नेपाल नर्सिङ परिषद्ले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ भित्रमा आफ्नै एक सय शैया अस्पताल सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको हो । ‘५० शैया मात्र स्वीकृत भएको सरकारी वा निजी अस्पताल देखाएर ४० जना विद्यार्थी भर्ना..
काठमाडौं, २० साउन । पछिल्लाे समय धेरै नेपाली युवा-युवतीहरू उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जाने गरेका छन् । विदेशमा उच्च शिक्षाको स्तर र पूर्वाधार नेपालको भन्दा राम्रो हुने भएकाले नेपाली विद्यार्थीहरु हरेक वर्ष उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने गरेका छन् । तर, विश्वविद्यालय वा कलेजको शुल्क भने हरेक विद्यार्थीका लागि चिन्ताको विषय हुने गरेको छ । यहाँ हामीले त्यस्ता १० देशको सूची तयार पारेका..
चितवन, १९ साउन त्रिभुवन विश्वविद्यालयले रामपुरमा इञ्जिनियरिङ क्याम्पस शुभारम्भ गरेको छ । विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डा तीर्थ खनियाँ र भरतपुर महानगरप्रमुख रेनु दाहालले क्याम्पसको संयुक्त रुपमा शुभारम्भ गर्नुभयो । मङ्सिरदेखि कम्प्युटर इञ्जिनीयरिङको पठनपाठन शुरु गर्न चितवन इञ्जिनीयरिङ क्याम्पस रामपुरको शुभारम्भ गरिएको हो । विश्वविद्यालयले हाल कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय रहेको स्थानमा क्याम्पस शुभारम्भ गरेको हो । विश्वविद्यालयको इञ्जिनीयरिङ सङ्कायको यो पाँचौँ..
उपकुलपति बन्न–बनाउन लबिङ
काठमाडौँ, १८ साउन । मुलुकमा सञ्चालित ११ विश्वविद्यालयमध्ये सातवटामा उपकुलपति, रेक्टर र रजिष्ट्रारलगायत पद भदौ ५ देखि असोज ५ गतेभित्र खाली हुँदैछन्। साउन ५ देखि त्रिवि सेवा आयोगका अध्यक्षको पद खाली भइसकेको छ। पद खाली हुन लागेसँगै विश्वविद्यालयको उपकुलपति बन्न राजनीतिक पार्टीनिकट भातृसंगठनआबद्ध प्राध्यापकहरूले शक्तिकेन्द्र धाउँदै उपकुलपति कसलाई बनाउने भन्नेबारे लबिङ थालेका छन्। विश्वविद्यालयको शैक्षिक प्राज्ञिक उन्नयनभन्दा पनि पार्टी र नेताहरूलाई..
काठमाडौं, १७ साउन । कक्षा १२ को ग्रेड वृद्धि (पुरक) परीक्षाको समय तालिका सार्वजनिक भएकाे छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले आगामी भदौ २२ र २३ गतेका लागि ग्रेड वृद्धि परीक्षाको समय तालिका तोकेको हाे। सूचना अनुसार परीक्षाको पहिलो दिन (भदौ २२ गते) अनिवार्य अंग्रेजी विषयको परीक्षा हुने छ । अंग्रेजी बाहेक अन्य एउटा मात्रै विषयको ग्रेड सुधार गर्न चाहने विद्यार्थीको परीक्षा पनि..
काठमाडौँ, १५ साउन । सरकारले सात विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा पूर्वएमाले र एकीकृत नेकपा माओवादीबीच दलीय भागबण्डा गर्ने तयारी गरेको छ । तत्कालीन नेकपा एमाले र एकीकृत नेकपा माओवादीबीच एकीकरण भए पनि अहिले पार्टीभित्र दुई खेमा देखिएको छ । नेकपाका अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पूर्वएमाले र माओवादीेका प्राध्यापकलाई नियुक्ति गर्ने आन्तरिक तयारी गर्नुभएको छ । अबको २० दिनपछि अर्थात..
हेटौँडा, १४ साउन प्रदेश नं ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले जनताको घरघरमा सेवा पुर्याउनु नै सङ्घीयताको मर्म भएको बताउनुभएको छ । सेवा प्रदायक निकायले पुरानो शैली परिवर्तन गरेमा मात्र व्यवस्था परिवर्तन भएको अनुभूति हुने उहाँको भनाइ थियो । मुख्यमन्त्री पौडेलले सबै व्यक्ति आआफ्नो क्षेत्रमा तीव्र गतिमा काममा लागे समृद्धि सम्भव हुने बताउनुभयो । एकजुट भएर काम गरेमा मात्र समृद्धि आउने बताउँदै उहाँले..
काठमाडौँ, १४ साउन सुन्दा पत्यार नलाग्ला तर यो सत्य हो । याशा एस्ले जम्मा १४ वर्षका भए । १४ वर्षको कलिलो उमेरमा नै उनी बेलायतको लेचेस्टर युनिभर्सिटीमा प्राध्यापक बन्न सफल भएका छन् । विश्वकै कान्छा प्राध्यपकका रुपमा आफ्नो परिचय बनाइरहेका याशासँग विलक्षण प्रतिभा छ ।गणित विषयमा विशेष दख्खल भएका उनलाई मानव क्याल्कुलेटरको उपमा समेत दिइएको छ । हालै लेचेस्टर युनिभर्सिटीले भिजिटिंग प्रोफेसरको..
चितवन, १४ साउन। भरतपुरका १५ बोर्डिङ स्कूल यस आर्थिक वर्षमा शुल्क बढाउन नपाउने गरी कारवाहीमा परेका छन्। भरतपुर महानगरपालिका अन्तर्गतको शैक्षिक प्रशासन महाशाखाले मंगलबार एक सूचना जारी गरी यस्तो निर्देशन दिएको हो। विद्यालय वर्गीकरण तथा शुल्क निर्धारण कार्यविधि २०७८ अनुसार उनीहरुले समयमै शुल्क प्रस्ताव पेस नगरेकाले बढाएर शुल्क लिन नपाएका हुन्। तर, ती स्कूलले नेपाल सरकारले बढाएको तलब अनुसारकै तलब शिक्षक तथा कर्मचारीलाई..
ग्रेडिङ प्रणालीको नतिजा उत्कृष्ट आउन अझै १० वर्ष लाग्छ : शिक्षामन्त्री
काठमाडौँ, १४ साउन नेपाल पत्रकार महासंघले मंगलबार आयोजना गरेको शिक्षा पत्रकारिता पुरस्कार २०७५ मा बोल्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले ग्रेडिङ प्रणालीको नतिजा राम्रो आउन समय लाग्ने बताएका छन्। मन्त्री पोखरेलले नयाँ प्रणाली लागू भएको २/३ वर्षमै नतिजा राम्रो आइ नहाल्ने बताए। '२/३ वर्षदेखि ११/१२ को नतिजा हेरेर शिक्षा प्रणालीको आलोचना गरिरहनु भएको छ। यो त १० वर्ष अघिको साथीहरूको मिहिनेत..
कक्षा १२ काे नतिजा : किन आउदैन सर्वोत्कृष्ट जीपीए
काठमाडौँ, १४ साउन । कक्षा १२ को वैशाखमा सञ्चालित परीक्षाको नतिजा बोर्डले सोमबार सार्वजनिक गरेको हो । कक्षा १२ अन्तिम परीक्षामा सर्वोत्कृष्ट जीपीए ४.०० कसैको पनि आउन सकेन । ३ हजार ६७ जना विद्यार्थीले उच्च तह ३.६१ देखि माथिको जीपीए ल्याएका छन् । उच्च तहको अंक ल्याउने समूहअन्तर्गत ४ जीपीए प्राप्त गर्ने परीक्षार्थीको संख्या शून्य रहेको छ । गत वर्षमा जस्तै यसपालि मध्यमस्तरको..
कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक, साढे ३ हजार विद्याथीले ल्याए 'ए प्लस'
काठमाडौं, १३ साउन । गत वैशाखमा सञ्चालन भएकाे कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक भएकाे छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को नतिजा भर्खरै सार्वजनिक गरेकाे हाे । भर्खरै सार्वजनिक गरिएको नतिजाअनुसार उच्च तह ३.६१ देखि ४.०० जीपीए प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको संख्या ३ हजार ६७ जना रहेको छ । परीक्षामा नियमित, ग्रेडवृद्धि र आंशिक तर्फ गरि कुल ४ लाख २८ हजार ६७ परीक्षार्थी सहभागी थिए..
काठमाडौं, १३ साउन । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सोमबार बोलाएको बैठकपछिकक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको छ । यो वर्ष कक्षा १२ को परीक्षामा चार लाख बढी विद्यार्थी सहभागी छन् । बोर्डले सबै विषयको परीक्षाफल सोमबार एकैपटक सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । यसअघि विज्ञान र अन्य संकायको फरक फरक समयमा नतिजा सार्वजनिक हुने भए पनि यसपल्ट भने एकैपल्ट सार्वजनिक गर्न लागिएको..
काठमाडौँ, १३ साउन । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले आज सोमबार कक्षा १२ को परीक्षाफल प्रकाशित गर्ने भएको छ । परीक्षा वैशाख २६ देखि सञ्चालन भएको थियो । साढे चार लाख विद्यार्थी परीक्षामा सामेल थिए । बोर्डले पहिलोपटक सबै विषयको परीक्षाफल एकैचोटि प्रकाशन गर्न लागेको हो ।..
कक्षा १२ को नतिजा सोमबार सार्वजनिक हुने
काठमाडौँ, १२ साउन कक्षा १२ को नतिजा सोमबार सार्वजनिक हुने भएको छ। बोर्ड स्रोतका अनुसार आइतबार परीक्षार्थीको सम्पूर्ण प्राप्ताङ्कलाई रुजु गरेर कम्प्युटरमा इन्ट्री गरिसकिएको छ। आइतबार रुजु गर्ने क्रममा कुनै समस्या नदेखिएकोले सोमबार नतिजा प्रकाशन गर्न लागिएको हो। नतिजा प्रकाशनका लागि सोमबार साँझ बोर्ड बैठक बोलाइएको छ। गत वैशाखमा सम्पन्न परीक्षामा मुलुकभरबाट चार लाख परीक्षार्थी सहभागी थिए। बोर्डले विगतमा विज्ञान विषयको नतिजा सुरुमा र..
जेहेन्दार विद्यार्थीलाई २० लाखको छात्रवृत्ति वितरण
भक्तपुर, १२ साउन भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित ख्वःप इञ्जिनीयरिङ कलेज र ख्वःप कलेज अफ इञ्जिनीयरिङको विभिन्न सङ्कायमा अध्ययनरत गरीब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई आज छात्रवृत्ति वितरण गरिएको छ । भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख एवं कलेज व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सुनिल प्रजापतिले ख्वःप इञ्जिनीयरिङ कलेजका १८ तथा ख्वःप कलेज अफ इञ्जिनीयरिङका १४ विद्यार्थीलाई रु २० लाख बराबरको छात्रवृत्ति वितरण गर्नुभएको हो । नगर प्रमुख प्रजापतिले विद्यार्थीको शैक्षिक क्षमता..
युवाको सुनिश्चित भविष्यका लागि 'करियर-टक' को आयोजना, सयौं विद्यार्थी लाभान्वित
काठमाडौं, १२ श्रावण । सुनिश्चित भविष्यका लागि युवाले चाल्नुपर्ने उचित कदमका विषयमा वृहत जानकारी गराउने उद्देश्यले शिक्षा प्रदायक संस्था प्लाटोनिक एजुकेशन सर्भिसले शुक्रबार राजधानीमा 'करिअर-टक' को आयोजना गरेको छ । विशेष गरी व्यबस्थापन संकायबाट प्लस २ सकेका विद्यार्थीलाई लक्षित उक्त कार्यक्रममा करियरसँग सम्बन्धित रहेर बिभिन्न बैंक तथा वित्तिय संस्था, पर्यटन, सुचना तथा संचार प्रविधि लगायत क्षेत्रका विज्ञहरुले सम्बोधन गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा ज्योति..
लाइसेन्स परीक्षाफल प्रकाशित, ७८% उत्तीर्ण
काठमाडौँ, १२ साउन नेपाल मेडिकल काउन्सिलले सञ्चालन गरेको नाम दर्ता (लाइसेन्स परीक्षा) अन्तर्गत स्नातक तह (एमबिबीएस) र (बिडीएस) को परीक्षाफल प्रकाशित गरेको छ । शनिबार सञ्चालित एमबिबीएस तहका परीक्षामा एक हजार ६८१ ले नाम दर्ताका लागि फारम भरेका थिए । तीमध्ये आठ जना अनुपस्थित र एक हजार ३११ जना अर्थात् ७८ उत्तीर्ण भएको काउन्सिलले जनाएको छ । यसैगरी बिडीएसतर्फ ३५३ जना सहभागीमध्ये १३८..
एसईई पूरक परीक्षा विवादमा, शिक्षाविद् भन्छन् - परीक्षाको मर्ममा प्रहार
काठमाडौँ, १२ साउन । शिक्षा मन्त्रालयको निर्णयअनुसार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले आगामी भदौ १ देखि परीक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेका बेला विवाद बढेको छ । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) मा ‘सी वा सी’ भन्दा कम ग्रेड प्राप्त सबै विषयमा विद्यार्थीले ग्रेडवृद्धि परीक्षा दिन पाउने निर्णय विवादमा परेको हो । शिक्षाविद् र बोर्डकै उच्च तहका कर्मचारीले सबै विषयमा ग्रेडवृद्धि गर्न दिने प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्..
काठमाडौँ, ११ साउन । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कर्मचारीलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर अंक थप गरिएका प्रमाणपत्र रद्द भएका छन् । अधिवक्ता सुरेन्द्रप्रसाद कोइराला र बानेश्वर क्याम्पसका केदार भट्टराईको प्रमाणपत्र त्रिविले रद्द गरेको हो । कानुनविपरीत अंक थप गरी ट्रान्सक्रिप्ट जारी गरेको प्रमाणित भएपछि कोइरालाको तीन र भट्टराईको एउटा ट्रान्सक्रिप्ट रद्द गरिएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयका परीक्षानियन्त्रक पुष्पराज जोशीले बताए । यो प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान..
सुरक्षित भविष्य खोज्दै विद्यार्थी, उचित अवसर पहिचानको खोजीमा !
काठमाडौँ, १० साउन सुरक्षित भविष्यका लागि युवाले उचित अवसरको पहिचान गर्नुपर्छ । आफ्नो क्षमता र रुचि अनुसारको अवसर खोजिएन भने सफलता प्राप्त गर्न सकिँदैन । आज राजधानीमा ओजित एक कार्यक्रममा वक्ताहरुले पनि विद्यार्थीको क्षमता र रुचि अनुसारको अवसर प्राप्त गर्न नसके भविष्यमा प्रगति गर्न नसकिने बताएका छन् । प्लाटोनिक एजुकेशन सर्भिसद्वारा राजधानीमा आयोजित ‘करिअर टक’ मा ज्योति विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत..
ललितपुरकाे थासिखेलमा नेपाल स्कुल अफ योग सञ्चालनमा
ललितपुर, १० साउन । ललितपुरकाे थासिखेलमा योग स्कुल सञ्चालनमा आएको छ । १२ वर्ष कतार बसेर फर्केका सातदोबाटो, ललितपुरका दिपक भेटवालले थासिखेलमा योग स्कुल सञ्चालनमा ल्याएका हुन् । बिहीबारदेखि नेपाल स्कुल अफ योगु सञ्चालनमा आएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले रिवन काटेर उक्त योग स्कुलको उद्घाटन गरेका थिए। भेटवाल कतारको एसएसके ट्रेडिङ कम्पनीमा म्यानेजरको रुपमा कार्यरत थिए। काम गर्दागर्दै उनलाई हाइपरटेन्सनको समस्या भयो। ‘यो समस्याका..
पढाइ खर्च दिने नाममा लाखौँ असुलेपछि ...
काठमाडौँ, ९ साउन एक हजार रुपैयाँ दिए बालबालिकाको पढाइका लागि रु पाँच हजार आउँछ भन्दै पैसा उठाइन्छ । स्थानीय समुदाय पैसा आउने लोभमा खुरुखुरु आफ्नो र परिवारको कागजपत्रसहित रु एक हजार बुझाउँछन् । एक–दुई जना होइन पैसा बुझाउन सयौँ व्यक्तिको लर्काे लाग्छ । यस्तो असुल कार्य जिल्ला वा विकट गाउँमा नभई मुलुकको राजधानी नै हुन्छ । जब प्रहरीमा घटना पुग्छ, स्थानीय समुदाय..
Results 912: You are at page7of 31